Fiirsada kaarboonku waxay ku beddeleysaa aluminium dalabyo badan oo kala duwan waxayna sameyneysay tobannaankii sano ee la soo dhaafay. Fiilooyinkaas waxaa lagu yaqaan xooggooda iyo adkaanshahooda gaarka ah waana kuwo aad u fudud. Xargaha fiilooyinka kaarboonka waxaa lagu daraa maadooyin kala duwan si loo abuuro waxyaabo isku dhafan. Qalabkan isku dhafan ayaa ka faa'iideysanaya astaamaha fiber iyo cusbi labadaba. Maqaalkani wuxuu bixinayaa isbarbardhig ku saabsan sifooyinka astaamaha kaarboon kaarboon ka soo horjeedka aluminium, oo ay weheliyaan qaar ka mid ah faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka walax kasta.
Kaarboonka Fiber vs Aluminiumka Qiyaasta
Hoos waxaa ku yaal qeexitaannada guryaha kala duwan ee loo isbarbar dhigo labada maaddadood:
Modulus of elasticity = "Adagnaanta" maaddada. Saamiga walwalka si loo adkeeyo walxaha. Jiirada culayska fekerka iyo cadaadiska culeyska walxaha ku jira gobolkeeda laastikada ah.
Awoodda siligga ugu dambeysa = culeyska ugu badan ee walxaha u adkeysan karo ka hor inta uusan jabin.
Cufnaanta = cufnaanta walxaha halkii mug.
Qalafsanaan gaar ah = Modulus of dabacsanaan loo qaybiyay cufnaanta maaddada. Waxaa loo adeegsaday isbarbardhiga walxaha cufnaanta isku midka ah.
Awood cufan oo gaar ah = Awood cufan oo loo qaybiyo cufnaanta maaddada.
Iyadoo macluumaadkan maskaxda lagu hayo, jaantuska soo socda wuxuu isbarbar dhigayaa kaarboon kaarboon iyo aluminium.
Fiiro gaar ah: Arrimo badan ayaa saameyn ku yeelan kara lambarradan. Kuwani waa guud; maahan cabbiraad buuxda. Tusaale ahaan, waxyaabo kala duwan oo kaarboon kaarboon ah ayaa lagu heli karaa qallafsanaan ama xoog sare, badiyaa iyada oo laga ganacsanayo yareynta guryaha kale.
Cabbiraad Fiber Kaarboon Aluminium Kaarboon / Aluminium
Nooca dabacsanaanta (E) GPa 70 68.9 100%
Xoog siligga (σ) MPa 1035 450 230%
Cufnaanta (ρ) g / cm3 1.6 2.7 59%
Madax adayg gaar ah (E / ρ) 43.8 25.6 171%
Xoog siligga gaarka ah (σ / ρ) 647 166 389%
Jaantuskani wuxuu muujinayaa in fiber-ka carbon-ka uu leeyahay xoog silig culeys ah oo qiyaastii 3.8 jeer ah kan aluminium iyo qallafsanaan gaar ah oo ah 1.71 jeer tan aluminium.
Isbarbar dhiga sifooyinka kuleylka ee kaarboonka iyo aluminium
Laba astaamood oo dheeri ah oo muujinaya farqiga u dhexeeya kaarboon iyo ka aluminium waa ballaadhinta kuleylka iyo kuleylka kuleylka.
Ballaarinta kuleylka ayaa sharxeysa sida cabirka maaddada ay isu beddesho marka heerkulku isbeddelo.
Cabbiraad Fiber Kaarboon Aluminium Aluminium / Kaarboon
Ballaarinta kuleylka 2 gudaha / gudaha / ° F 13 gudaha / gudaha / ° F 6.5
Aluminium waxay qiyaastii lix jeer ka ballaarisaa kuleylka ee kaarboonka kaarboon.
Faa’iido iyo Qasaaro
Marka la qorsheynayo agabyada iyo nidaamyada horumarsan, injineerada waa inay go'aamiyaan guryaha maaddooyinka ay ugu muhiimsan yihiin codsiyada gaarka ah. Marka arrimaha xoog-ilaa-miisaan ama adkaansho-ilaa-miisaan culus, fiber kaarboonku waa xulashada muuqata. Marka laga hadlayo qaabeynta qaabdhismeedka, marka culeyska lagu daro wuxuu soo gaabin karaa wareegyada nolosha ama wuxuu horseedi karaa waxqabad liita, naqshadeeyayaasha waa inay fiiriyaan fiyuus kaarboon ahaan sida dhismaha ugu wanaagsan Marka adkaantu ay lama huraan tahay, kaarboonka kaarboonku si fudud ayaa loogu daraa qalab kale si loo helo astaamaha lagama maarmaanka ah.
Waxsoosaarka ballaarinta kuleylka ee kaarboon fiber-ka ayaa ah faa iido weyn marka la abuurayo alaab u baahan heer sare oo sax ah, iyo xasilooni cabbir leh xaaladaha ay heerkulku isbadalayaan: aaladaha muraayadaha, 3D scanners, telescopes, iwm.
Waxa kale oo jira faa iidooyin yar oo laga helo isticmaalka fiber-ka kaarboon. Fiber kaarboon ma dhaliyo. Xamuulka ka hooseeya, kaarboon kaarboonka ayaa foorari doona laakiin si joogto ah ugu habboonayn qaabka cusub (laastik). Mar haddii xoog-qabashada ugu dambeysa ee maaddada kaarboon kaarboonka ay dhaafto fiber-ka kaarboonku si lama filaan ah ayuu u fashilmaa. Injineeradu waa inay fahmaan habdhaqankan oo ay ku daraan qodobo nabadgelyo si loola xisaabtamo marka la sameynayo alaabada. Qaybaha kaarboon kaarboonku sidoo kale aad ayey uga qaalisan yihiin aluminium sababtoo ah qiimaha sare ee loo soo saarayo kaarboonka kaarboon iyo xirfad weyn iyo khibrad ku lug leh abuurista qaybo isku dhafan oo tayo sare leh.